DAAWO MUUQAAL-Madaxweyne Xasan Sheekh oo dib ugu soo laabtay dalka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
DAAWO MUUQAAL-Madaxweyne Xasan Sheekh oo dib ugu soo laabtay dalka “SAWIRRO”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabta dalka, kaddib markii uu socdaal ku tegay dalka Boqortooyada Sacuudiga, halkaasi oo uu kula kulmay Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa salaam sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaasi oo ku sugan garoonka Aadan Cadde, waxaana Madaxweynuhu uu qeybta nasashada kulan kula qaatay Guddoomiyaha baarlamaanka iyo mas’uuliyiintii kale ee soo dhaweynta ka qeyb qaadatay.
Madaxweynaha dalka Turkgia Recep Tayyip Erdoğan ayaa la filayaa in uu soo gaaro garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay iminka ku suganyihiin Madaxda ugu sareysa ee dalka, kuwaasi oo diyaar u ah soo dhaweynta Madaxweynaha Turkiga.
SAWIR QAADE: Carab Cabdiweli
Lazio oo Ka Badisay Kooxda AC Milan